Ukunikezelwa kwentshayelelo: Blackview BV8800 kuphela 225 euro | Iindaba zegajethi
Ukunikezelwa kokuqaliswa: Blackview BV8800 nje 225 euro
UIgnacio Sala | 10/01/2022 14:00 | Iiselfowuni
I-Blackview ibonise ukubheja kwayo entsha ngo-2021 ekupheleni kuka-2022. Sithetha nge-Blackview BV8800, i-terminal efikelela kwimarike kunye nabanye. ngaphezu kokusebenza okunomtsalane kunye nexabiso lemali. Ukubhiyozela ukuqaliswa kwayo, sinokufumana esi sixhobo nje 225 euro nge-AliExpress.
Ukuba ujonge ephathwayo nge iprosesa enamandla, imemori eyaneleyo kunye nokugcinwa Kwaye oko kusinika iseti enomdla yeekhamera kunye nebhetri emangalisayo, kuya kufuneka ujonge kuyo yonke into esiyinikwa sesi sixhobo kwaye siyichaza apha ngezantsi.
I-Blackview BV8800 esandula kuqaliswa ibandakanya inani elikhulu le uphuculo xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili zalo mvelisi kwaye inayo yonke into eyenzekayo ukuba ibe yifowuni oyikhangelayo, nokuba uyisebenzisa njani.
Ukuba uyakonwabela ukuphuma ngaphandle, kuya kufuneka uyazi ukuba iBlackview BV8800 ibandakanya Isiqinisekiso se-MIL-STD-810H, isethi yeekhamera ze-4, kubandakanywa ikhamera yombono wasebusuku kunye nebhetri engaphezulu kwe-8.000 mAh apho awuyi kuba nexhala malunga nokutshaja ngokuqhubekayo.
1 Blackview 8800 Iinkcukacha
2 Iikhamera kuyo nayiphi na imfuno
3 Amandla okonwaba okukhulu
4 Ibhetri iintsuku ezininzi
5 Ukothuka kunye nokuwa phantsi
6 Umboniso we-90 Hz
7 Iyahambelana noDlalo lukaGoogle
8 Iimpawu zokhuseleko
9 Konwabele oko
Blackview 8800 Iinkcukacha
Inkqubo yokusebenza IDoke OS 3.0 esekwe kwi-Android 11
Isikrini 6.58 intshi - IPS - 90 Hz ukuhlaziya - 85% umlinganiselo wesikrini
Isisombululo sescreen 2408 × 1080 IHD epheleleyo +
Inkqubo Imidiya ye-MediaTek Helio G96
Imemori ye-RAM 8 GB
Ukugcina 128 GB
Ibhetri I-8380 mAh - Ixhasa i-33W yokutshaja ngokukhawuleza
Iikhamera zangasemva I-50 MP + i-20 MP + i-8 MP + i-2 MP
Ikhamera yangaphambili 16 MP
KwiVidiyo yeBluetooth 5.2
U kuhamba GPS-GLONASS-Beidou-Galileo
Nets GSM 850/900/1800/1900
I-WCDMA B1 / 2/4/5/6/8/9 ene-RXD
I-CDMA BC0 / BC1 / BC10 ene-RXD
Iziqinisekiso IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
Imibala Ulwandle oluluhlaza / iMecha iOrenji / Uloyiso oluMnyama
Ubukhulu 176.2 × 83.5 × 17.7mm
U bunzima I-365 gram
abanye I-Dual Nano SIM-NFC-Inzwa yoshicilelo lweminwe-Ukwamkelwa kobuso-SOS-OTG-uDlalo lukaGoogle
Iikhamera kuyo nayiphi na imfuno
Ngokungafaniyo nabavelisi abaninzi abakumgangatho ophezulu, abaye bancamathela kwi-12 MP, IBlackview isinika i-50 MP yoluvo oluphambili, isisombululo esiya kusivumela ukuba sandise zonke izinto zethu zokubamba kwaye sizonwabele zonke izinto eziboniswe kuyo.
Kwakhona, xa uprinta, asinalo umlinganiselo ofanayo womlinganiselo ukuba sifumana kuphela 12 MP. Ukongeza, nayo ine-sensor ye-20 MP, inzwa yokubona ebusuku eya kusivumela ukuba sithathe iifoto kunye namavidiyo kuyo nayiphi na imeko yokukhanya.
Kunye nazo zombini abenzi boluvo, sikwafumana a isivamvo se-engile ebanzi, inzwa esinika i-angle ye-117-degree yokujonga kunye ne-8 MP sensor enoxanduva lokufiphalisa imvelaphi yemifanekiso esiyithathayo ngemodi ye-portrait.
Zonke iikhamera zisebenzisa Intelligence Intelligence ngexesha lokucubungula, ukwenzela ukuba kuphuculwe, kungekhona nje umgangatho wokubamba, kodwa nokuphelisa ukungafezeki okuncinci.
Ngaphambili, Sifumana ikhamera ye-MP ye-16, ikhamera ekwabandakanya izihlungi zobuhle ukuphucula i-selfies yethu, ukunciphisa imigca yokubonakalisa, ukungafezeki kunye nabanye, emva koko, sihlala sinyanzelekile ukuba sisuse.
Amandla okonwaba okukhulu
Nokuba uyonwabela eyona midlalo ifuna kakhulu okanye ukurekhoda iividiyo ngokuqhubekayo okanye ukuthatha iifoto, ngeprosesa Imidiya ye-MediaTek Helio G96 asiyi kuba nayo nayiphi na ingxaki yokusebenza.
Kanye nale nkqubo, edlula amanqaku angama-300.000 kwiibenchmarks ze-AnTuTu, sifumana I-8 GB ye-RAM yohlobo lwememori ye-LPDDR4x kunye ne-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi kohlobo lwe-UFS 2.1.
Zombini imemori ye-LPDDR4X kunye ne-UFS 2.1 yokugcina isinika isantya sedatha kunye nolawulo lwesicelo iya kuphepha ukulibaziseka okungathandekiyo, i-lags kunye nabanye ukuba sikwiitheminali ezithobekileyo ngakumbi.
Ibhetri iintsuku ezininzi
La ibhetri kunye nekhamera zingcwele. Bonke abasebenzisi abafuna ukuhlaziya i-terminal yabo endala ngentsha kufuneka bahlale bewathathela ingqalelo la macandelo mabini. Sele sithethile ngecandelo lekhamera elingentla.
Ukuba sithetha ngebhetri, kufuneka sithethe malunga I-8.340 mAh enikezelwa yiBlackview BV8800. Ngeli bhetri likhulu, elinokuhlala ukuya kuthi ga kwiintsuku ze-30 kwi-standby, sinokwenza uhambo oluya ngaphandle ngoxolo olupheleleyo lwengqondo ngaphandle kokoyika ukuxinga.
IBlackview BV8800 yi I-33W yokutshaja ngokukhawuleza iyahambelana, esivumela ukuba siyihlawule kwiiyure nje ze-1,5. Ukuba sisebenzisa itshaja yamandla asezantsi, ixesha lokutshaja liya kuba lide.
Ikwabandakanya inkxaso yokutshaja umva, esivumela ukuba sihlawule ezinye izixhobo ngebhetri yesi sixhobo ngentambo ye-USB-C.
Ukothuka kunye nokuwa phantsi
Njengezixhobo ezininzi ezivela kulo menzi, i-BV8800 isinika isiqinisekiso somkhosiIsatifikethi somkhosi sihlaziywa kwimigangatho emitsha, siyenza ilungele abo basebenzisi abathanda ukwenza iihambo ukuya ngaphandle.
Kwakhona, enkosi Ikhamera yombono ebusuku, sinokujonga ngokulula kwaye ngaphandle kokusebenzisa i-flashlight, ukuba sijikeleze kukho isilwanyana okanye, sifumane ilungu leqela elilahlekileyo.
Umboniso we-90 Hz
Isikrini se-Blackview BV8800, sifikelela kwi-intshi ye-6,58, kunye nesisombululo se-FullHD + kunye ne-screen ratio ye-85%. Kodwa, umtsalane wayo ophambili ufumaneka kwizinga lokuhlaziya, izinga lokuhlaziya elifikelela kwi-90 Hz.
Enkosi kweli zinga liphezulu lokuhlaziya, yonke imixholo, yomibini imidlalo kunye nezicelo zokukhangela kunye namaphepha ewebhu, iya kujongeka imanzi ngakumbi kuneemiboniso zemveli ezingama-60Hz, njengoko iifreyimu ezingama-90 ngesekhondi ziya kuboniswa rhoqo ngomzuzwana endaweni ye-60.
Iyahambelana noDlalo lukaGoogle
Ngaphakathi kweBlackview BV8800, sifumana umaleko wokwenza ngokwezifiso IDoke OS 3.0, esekwe kwi-Android 11 kwaye iyahambelana ne-Play Store, eya kusivumela ukuba sifake naluphi na usetyenziso olukhoyo kwivenkile esemthethweni kaGoogle.
IDoke OS 3.0 yi uphononongo olukhulu xa kuthelekiswa neDoke OS 2.0. Ibandakanya izijekulo zokujonga ngakumbi, uyilo olulula ukulusebenzisa, ukulayishwa kwangaphambili kwesicelo esihlakaniphile, incwadana eneenkcukacha ehlaziyiweyo exhasa ukubhala ngesandla kunye nokurekhoda kwememo yelizwi ...
Njenge-terminal elungileyo exabisa ityuwa, iBlackview BV8800, ibandakanya zombini isivamvo somnwe ifakwe kwiqhosha lokuqala kunye nenkqubo ye ukuqaphela ubuso. Ukongeza, ikwabandakanya iqhosha esinokuthi silungelelanise ukusebenza kwalo kwe-7 imisebenzi eyahlukeneyo.
Itshiphu ye-NFC ayinakuphoswa kwesi sixhobo. Ngombulelo kule chip, sinokuhlawula nakweliphi na ishishini ngekhadi lethu letyala ngaphandle kokuba siphathe isipaji sethu kunye nezithuthi zikawonke-wonke.
La ukwazisa ukwazisa esivumela ukuba sifumane iBlackview BV8800 kuphela 225 euro VAT kunye nokuthunyelwa kubandakanywa, ilinganiselwe kwiiyunithi zokuqala ezingama-500. Ukuba uthanda yonke into enikezelwa yile terminal entsha yeBlackview, sukucinga kabini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukunikezelwa kokuqaliswa: Blackview BV8800 nje 225 euro
U-Anker utyhila iimveliso zakhe ezintsha kwi-CES 2022
I-Dreame D9 Max, uhlalutyo lwesicoci sokutshayela irobhothi esisebenza kakhulu